मौन अवधिमा माधव नेपाललाई केपी ओलीको लिखित धम्की, ‘क्षम्य हुनै सक्दैनन्’ – नेपाली संगसार
मौन अवधिमा माधव नेपाललाई केपी ओलीको लिखित धम्की, ‘क्षम्य हुनै सक्दैनन्’
नेपाली संगसार calendar_today ५ जेष्ठ २०७८, 11:06 am
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र विवाद समाधानका लागि प्रयास भइरहेका बेला फेरि नयाँ विवाद खडा भएको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोलि बिहीवार हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई मतदान नगर्नेलाई क्षमा नदिने लिखित धम्की दिएका छन् ।
एमालेकै नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले भने स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई मतदान गर्ने तयारी गरेको छ । देवकोटालाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको समेत समर्थन छ ।
ओलीले बुधबार एक अपिल सार्वजनिक गर्दै नेता थापाको विजयले कम्युनिस्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्‍याउने जनाएका छन् ।
‘जेठ ६ गते बागमती प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त पदमा कमरेड रामबहादुर थापा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकजना वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । उहाँको विजयले कम्युनिष्ट आन्दोलनको भावनात्मक एकतामा समेत बल पुर्‍याउने छ,’ अपिलमा उल्लेख छ, ‘तसर्थ यस निर्वाचनमा एकतावद्ध भएर आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई विजयी बनाउनु हुन आग्रह गर्दछु ।’
सोमबार रातिदेखि नै उपनिर्वाचनको मौन अवधि सुरु भइसक्दा समेत निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गर्दै ओलीले मतदानको अपिल गरेका छन् । ओलीले पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दिनु, लाखौं जनताको हृदयमा रहेको निर्वाचन चिह्नलाई अवमूल्यन गर्नु र पार्टी निर्णयको विपक्षमा उभिएर मत खसाउने जस्ता विषय एमाले पार्टीमा कल्पना बाहिरको कुरा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । एमालेकै नेता नेपाल पक्षले देवकोटालाई स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएको थियो ।
ओलीले एमाले भएर एमाले उम्मेदवारलाई नै मत नदिने विषय क्षमायोग्य नहुने धम्की समेत दिए । ‘यस्ता प्रवृत्ति बहुदलीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने कुनै पनि पार्टीका लागि समेत स्वीकार्य या क्षम्य हुनै सक्दैनन्,’ अपिलमा उल्लेख छ ।
मंगलबार निर्वाचनमा सहयोग माग्दै नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न गएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सहयोग नपाउने संकेत पाएपछि आज बुधबार ओलीले लिखित अपिल नै जारी गरेका छन् ।
‘हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हौं । पार्टीका सयौं कार्यकर्ताहरू र हजारौं मतदाताको अमूल्य मतबाट विजयी बनेर यस जिम्मेवारीमा आएका हौं । निर्वाचन अभियानका क्रममा र विजयपछि पार्टी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषयहरू जसरी पनि पूरा गरिछाड्ने छौं भनेर हामीले जनतामाझ प्रतिबद्धता गरेका छौंं । हामी सबैले पार्टी सदस्यता लिँदा, विभिन्न तहका जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रत्येक पटक पार्टीप्रति बफादार हुने र पार्टीे हित विपरीत काम नगर्ने शपथ लिइआएका छौं । आफ्नै शपथ कुन स्वार्थ, के कारण वा कस्तो बाध्यताले हामी पालन नगर्ने विन्दुमा पुग्छौं ? पार्टी जीवनमा यो अकल्पनीय हो, यसो हुनै सक्दैन,’ ओलीले चेतावनी शैलीमा भनेका छन् ।
यस्तो छ अपिलको पूर्णपाठ –